Breaking News:Abbaa Duulaa Gammadaa hojii isaanii lakkisan - Gaachana Sabaa
FEATURED OROMIYAA SIYAASAA
October 7, 2017 October 7, 2017 Gaachana Sabaa
Abbaan Duulaa Gammadaa afayaa’iin mana marii paarlaamaa Itoophiyaa hojii isaanii lakkisuuf xalayaa galfatan jechuun maddeen qabatamaan lama Akka Addis Standarditti himan AS maxxansaa guyyaa har’aa Onkololeessa torbaa bara 2017 irratti baaseen ibseera.
Abbaan Duulaa miseensa Opdo gameeyyii keessaa tokko yeroo tahan bulchiinsa mootummaa wayyaanee keessattii aangoo sadarkaa garaagaraa qabaachuun tajaajilaa akka turan beekamaa dha.
Akka maddeen kanneen jedhanitti xalayaa hojii gadhiisuu mootummaa federaalaatti akka galfatan ibsuun sababni murtii kana isaan fudhachiise mormii Lola dhiyoo kana liyyuu poolisiidhaan uummata nagaa Oromoo irratti kaasee baay’inaan 150 000 ol tahan lafaa fi qabeenya isaanii irraa buqqifamu fi ajjeefamuu akka tahe ibsan.
Dabalataan jijjiirama siyaasaa ammaan tana deemaa jiruu fii akkataa qaamoonni nageenyaa jedhaman kunii fi qaamoonni federaalaa rakkina dhalate kana itti qaban akka isaan hin gammachiifne tahuu himaniiru.
Dhiyoo kana Abbaa Duulaa fi Bulchiinsa wayyaanee ol aanaa gidduu raakkoon guddaan kan dhalate sababa federaalli bilisaan rakkina kana gidduu bu’uu diduun akka tahe beekaamaa dha.Duras Liyyuu poolisiin qaama mootummaa federaala Itoophiyaa akka tahe beekamaa dha,kan isaan bobbaase osoo beeknu akkamitti Abbaan Duulaas tahe bulchiinsi Opdo akka rakkoon kun federaalaan furamu eegaa turan naaf hin galle.
Abbaan Duulaa yoo bakka amma jiru gadhiise illee qaama Opdo tahuun akka hafu beekameera,kun ammoo ilaalcha Opdo’n wayyaaneef qabdu akka jijjiiru abdii godhachaa kan hafanis akka rakkina uummata biyyattii hubatanii tarkaanfii mataa isaanii fudhatan uummani isaan maqaaf bakka bu’an isaan eegaa.
Wayyaaneen harka goowwicha Abdi Mohamed qabachuudhaan akka nulolte nuti arginus sabaa himaalee adduunyaa biratti akka uummanni Oromoo fi Somaalee daangaa fi lafa dheeedaa irratti wal lolanitti hubachiisuun maqaa isaanii adduunyaa biratti tikfachuu akka ture dhugaa nuti beeknu dha.Malli siyaasaan hamaan kun garuu wayyaaneef gaaga’umsa qabaachu isaa tilmaamuun nama hin dhibu.
Itoophiyaan jabina fi baay’ina waraanaa qabduun hanga biyya oollaatti deemuun Ameerikaaf akka ergamtu namuu nii beekaa yoo dhugaa uummataaf dhaabbatan qawween tokko silaa uummata irratti hin dhukaatu turte,kanaafuu Wayyaaneen eenyu akka taate dhugaatti of saaxiluun haalluu dhugaa ishii kan duraa caalaa nu argisiiste.
Ija adduunyaa biratti wayyaneen baay’ee akka hojjattee milkoofte hubannee rakkina funduraaf wayyaaneen kaasuu deemtuuf qophii saaxiluu irratti namuu qophaa’uu qaba.
← Weebsaayitoota maallaqa malee Isportii online dabarsan keessaa muraasa
Olympian Tirunesh Dibaba Win chicago Marathon 2017 →
Trump: “Rocket Man’s on suicide mission”
September 20, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Trump: “Rocket Man’s on suicide mission”